Bulshada maanta, gaar ahaan adduunka warshadaha ku shaqeeya, ayaa waxaa saaran cadaadis sii kordhaya: dadka intiisa badani waxay dareemaan inay si joogto ah cadaadis ugu jiraan wax. Dadku waxay la ildaran yihiin caqabado xagga waqtiga ah, cadaadis ah inay qabtaan (shaqada, iskuulka, bulshada), dhibaatooyin dhaqaale, amni xumo, argagixisanimo, dagaal, masiibooyinka cimilada daran, kalinimada, rajo la’aanta, iwm. Iwm
Subaxaan waxaan istaagay muraayadda horteeda waxaanan weydiiyay su’aasha: muraayadda, muraayadda derbiga ka soo muuqanaya, waa kuma kan ugu quruxda badan waddanka oo dhan? Markaas muraayadda ayaa igu tidhi: fadlan ma iska dhaafi kartaa? Waxaan ku weydiinayaa su’aal: «Ma aaminsanahay waxaad aragtay ama si indho la’aan ah ayaad u aamisaa? Maanta waxaan si dhow u eegaynaa iimaanka. Waxaan rabaa inaan sameeyo hal xaqiiqo oo cadeeya: Ilaah wuu nool yahay, wuu jiraa, rumeeyaa mise maya! Ilaah kuma tiirsaneyn caqiidadaada ...
Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna u bixisaan sida allabari nool oo quduus ah oo Ilaah ku farxo. Taasi waa adeeggaaga caabudaadda macquulka ah ”(Rooma 12,1). Taasi waa mawduuca wacdinta. Waxaad si sax ah u ogaatay inuu eray ka maqan yahay. Marka lagu daro cibaadada macquulka ah, cibaadadayadu waa mid macquul ah. Ereygan waxaa laga soo qaatay "caqli ahaan" Giriigga. Howlaha lagu sharfayo Eebbe waa ...
Maanta, Kirismaska, waxaan ula macaamilaynaa “hubka Ilaah” warqaddii ay u qortay Efesos. Waad la yaabi doontaa sida tani ay ula xiriirto Ciise Badbaadiyeheenna. Bawlos warqaddan wuxuu ku qoray xabsi ku yaal Rome. Wuxuu ka warqabay daciifnimadiisa wuxuuna isku halleeyey ciise. Ugu dambayn, ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa. Ku dhaji hubka Ilaah, si aad ugu adkaysatid weerarada jinniyo ee Ibliiska “…
Maanta waxaan jecelahay inaan kugu dhiiri geliyo inaad dhegeysatid digniinta uu Paul siiyay kaniisadda Filibiin. Wuxuu ka codsaday inay wax qabato waxaanan ku tusi doonaa waxa ay arintani ku saabsan waxaana aan kaa codsanayaa inaad go aansato inaad sidooda oo kale sameyso. Ciise gebi ahaanba wuxuu ahaa Ilaah iyo gebi ahaanba aadanaha. Qoraal kale oo ka hadlaya luminta ilaahnimadiisa ayaa laga heli karaa Filiboy. «Maxaa yeelay, fikirkan adiga ayaa idinku dhex jira, kaas oo sidoo kale ku jira Ciise Masiix, kan, markuu ahaa kan ...
Sannado badan ka hor waxaan maqlay farriin markii ugu horreysay, taas oo in badan iga qalbi qaboojisay tan iyo markaas. Waxaan weli u arkaa inay tahay farriin aad u muhiim ah oo ka ahaatay Kitaabka Quduuska ah. Farriinta ayaa ah in Eebbe badbaadin doono aadanaha oo dhan. Ilaah wuxuu diyaariyey hab ay dadka oo dhami ku gaadhaan badbaadada. Hadda wuxuu fulinayaa qorshihiisa. Aynu marka hore ka fiirsano jidka badbaadada wadajirka ah ee ereyga Eebbe ...
Axdiga Hore waa sheeko rajo beel. Wuxuu ku bilaabmaa muujinta in dadka loo abuuray aragtida Ilaah. Laakiin wakhti aan dheerayn ayay dadku dembaabeen oo jannada laga eryay. Laakiin markii xukunka xukunka la yimid eray ballan qaad ah - Ilaah wuxuu Shayddaan ku yidhi in mid ka mid ah farcanka Xaawa uu madaxiisa burburin doono (Bilowgii 1). Xornimo ayaa imaan doonta. Eva waxay u badan tahay inay rajeysay ...
Masaalka caanka ah ee Ciise: Laba qof ayaa taga macbudka si ay u tukadaan. Mid waa Farrisi, kan kalena cashuurqaade (Lukos 18,9.14). Maanta, laba kun oo sano ka dib markii Ciise masaalkan yidhi, waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan si ogaal ah u naxno oo aan nidhaahno, "Hubaashii, Farrisiinta, sumcadda madax-bannaanida iyo munaafaqnimada!" Waa hagaag ... laakiin aan iska dhigno qiimeyntan isku day inaad qiyaasto sida masaalku Ciise ...
Ujeedka maanta ee Wadada Parade ee Zurich waa: "Qoob ka ciyaarka xorriyadda". Websaydhka waxqabadka ee aan akhrinay: “Street Parade waa bandhig qoob-ka-ciyaarka jacaylka, nabadda, xorriyadda iyo dulqaadka. Ujeeddada mowduuca waddada "DANCE FOR xorriyadda", qabanqaabiyeyaashu waxay diiradda saaraan xorriyadda ". Rabitaanka jacaylka, nabadda iyo xorriyadda weligiisba waa mid welwel ku haysa aadanaha. Nasiib darrose, si kastaba ha noqotee, waxaan ku nool nahay duni si ...